Madaxweynaha Somaliya Oo Qudbad Dhinacyo Badan Taabanaysa Ka Jeediyay Shirweyne Muqdisho Ka Furmay . | Burco Media
Madaxweynaha Somaliya Oo Qudbad Dhinacyo Badan Taabanaysa Ka Jeediyay Shirweyne Muqdisho Ka Furmay .
September 2, 2013 | Filed under: Latest News | Posted by: farxaan
Muqdisho(BM) – Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamud ayaa maanta furay Shirweynaha Qaranka ee Siyaasadda iyo Tiigsiga 2016 oo ka bilowday Muqdisho, oo muddo 5 cisho ah socon doono.
Madaxweynaha waxaa ku wehliyey furitaanka shirkan Sii Hayaha Ra’iisul Wasaaraha, ahna Ra’iisul Wasaare ku xigeen iyo Wasiirka Arrimaha Dibedda Marwo Fowzia Yusuf Haji Adam, Wasiiro, Xildhibaano, Guddoomiyaha Gobolka ahna Duqa Magaalada, Ergeyga Gaarka ah ee Xoghayaha Guud ee QM, safiirada dalalka safaaradaha u joogaan Soomaaliya iyo mas’uuliyiin kale.
Madaxweynaha oo khudbad taariikhi ah ka jeediyey madasha shirka ayaa u mahadceliyey ka soo qeybgalayaasha shirkan muhiimka ah isla markaana ku dhiiri geliyey inay muddada 5ta maalmood ah ay juhdi fara badan geliyaan sidii ay uga soo talo bixin lahaayeen habka ugu habboon ee loo gaari karo doorashooyin xor ah oo ka dhaca dalka sanadka 2016ka.
Shirkan oo ay soo qabanqaabisay dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa ujeedadiisu tahay in shacabka laga qeybgaliyo talada dalka, si dowladdu ay u dhaqangeliso fikir Soomaaliyeed oo saliim ah oo Soomaali ka yimid. Shirkan ayaa waxaa ka soo qeybgalaya 200 qofood oo ka kala yimid dhammaan qeybaha kala duwan ee bulshada oo isagu jira qurbojoog, aqoonyahanno, gobollada dalka, bulshada rayidka qeybahooda kala duwan sida dumarka iyo dhalinyarada.
Madaxweynaha oo ka hadlayey ujeedada shirka ayaa yiri “ Dowladdu waxey isku qancisay in talada dalka laga qeybgaliyo dadka, oo intiina maanta fursadda u heshay ka soo qeybgalka shirkan, waxaan idiin sheegeynaa inaan dooneyno tallooyinkiina saliimka ah oo aad 5ta maalmood ku gorfeysaan sidii dalka looga hirgelin lahaa doorashooyin xor ah. Qaarkiin waa dad aan garanayo oo fahamsan caqabadihii la soo maray isla markaana aan ku tuhmeyno inay na siiyaan tallooyinkii aan uga wada gudbi laheyn caqabadaha jira. Shirar hore oo waxaa jiray aan qabannay oo runtii tallooyinkii ka soo baxayna ay xukuumadda ku howlan tahay dhaqangelintoodii. Waxaan rabnaa tallooyin ay ummadda Soomaaliyeed leedahay waana sababta aan shirkan muhiimka ah u qabaneyno. Shirkan waa mid Siyaasadeed, oo aan dooneyno dalkan inaan horumarka dowladda uu noqdo mid la sii joogteeyo, ilaa aan ka gaarno marxalad shacabku ku faani karo. Arrimaha idin horyaalla ayaa ah dib-u-habeynta dastuurka, sameynta xisbiyada siyaasadda, guddiga doorashooyinka, dhaqangelinta Federaalka, dib-u-heshiisiin iyo maamul wanaag oo intaba ah dariiqadii aan ku gaari laheyn doorashooyin xor ah.”
Madaxweynaha ayaa ka hadlay horumarka dowladda ayaa yiri “Sanadkii la soo dhaafay wax badanbaa noo qabsoomay oo ay ka mid yihiin dhanka amniga, maareynta maaliyadda, dib-u-habeynta garsoorka iyo dib-u-heshiisiinta. Hase yeeshee waxaa jira arrimo aan sidaan rabnay noogu qabsoomin oo aan dooneyno inaan xoogga isagu geyno. Labada sano ee soo socoto waxaa nalaga rabaa inaan howlo badan qabanno sida dib u eegista dastuurka oo afti dadweyne lagu ansaxin doono, dhaqangelinta Federaalka, sameynta xisbiyada siyaasadeed, guddiga doorashooyinka, maareynta maaliyadda iyo maamul wanaagga oo dhammaan ah arrimaha na sugaya si aan dalka u gaarsiino doorashooyin.”
Madaxweynaha oo hoosta ka xariiqayey sida ay uga go’antahay in dalka doorashooyin la gaarsiiyo ayaa yiri “Labo arrinba ma dooneyno inay dhacaan 2016ka. Marka hore inaan soo kalifno Madax dhaqameedyada oo ay noo soo xulaan xildhibaanadii iyo marka labaad inaan codsanno muddo kororsi (extension). Dariiqa kaliya ee noo furan waa inaan suurto gelinaa inay doorashooyin dhacaan. Waa dhici kartaa inaan fiirino qaabka iyo habka ugu habboon, oo deegaanada aan laga hirgelin Karin doorashooyin sidii loo heli lahaa qaab dadka deegaanka ay talo ku yeeshaan cidii matali laheyd. Goobaha nabadda ahna aan ka suurto gelino doorashooyin xor ah.”
Madaxweynaha oo ka hadlayey caqabadaha jira ayaa sheegey in dhanka amniga, ciidanku ay safka hore dagaalka ku jiraan, isla markaana ay wadaan barnaamijkii xasilinta, dowladduna ay dib-u-habeyn iyo tababar siin ku howlantahay. Caalamka waxaa ciidanka dib-u-habeyn iyo tababar la siiyaa xilli uusan dagaal ku jirin, laakin dalkeenna waa mid ka duwan. Madaxweynahu waxuu sheegey in dhanka maaliyadda horumar ballaaran laga sameeyey, hase yeeshee ay jiraan qaladaad farsamo oo ay keeneyso aqoonyarida na heysata.
Madaxweynaha ayaa sheegay in beesha caalamku ay maanta u soo jeedo Soomaaliya, dhammaanteenna nalooga baahanyahay sidii aan fursadaas uga faa’iideysan laheyn. Shacabka Soomaaliyeedna waxaa laga rabaa inay ku midoobaan midnimadooda iyo inay la shaqeeyaan dowladda si hadafka aan wada hiigsaneyno aan u wada gaarno. Macno ma sameyneyso inaan kala shakino, kala foggaano oo aan danaha yar-yarka ah ku mashquulno. Danteenna guud baa na wada kaafineysa oo sahleysa inay danaheenna gaarka ah hirgalaan.
Madaxweynaha ayaa ugu danbeyntii yiri “Dowladda waxaa ka go’an in shirkan uu nqdo mid najaxa, oo fikir xor ah oo soomaaliyeed, oo si Soomaalinimo ah ugu shiraya dalkooda aad soo saartaan. Dowladduna waxey ballanqaadeysaa in tallooyinkiinna la dhageysto, isla markaana ay saldhig u noqdaan istiraatejiyadda iyo qorshaha dowladda. Waxaan markale idinkaga mahadcelinayaa, isla markaana idiin rajeynayaa shir guul ah, oo aad si dhab ah oo taxadar ah u gudagashaan howshiina idinkoo u madax-bannaan.”